नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : समाधान खोज्न दिल्ली धाउने, दिल्लीको आशिर्बाद लिने, कहिले १२ बुँदे त कहिले ४ बुँदे सम्झौता गरेर स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको अस्तित्व धुलोमा मिलाउने !!??
समाधान खोज्न दिल्ली धाउने, दिल्लीको आशिर्बाद लिने, कहिले १२ बुँदे त कहिले ४ बुँदे सम्झौता गरेर स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको अस्तित्व धुलोमा मिलाउने !!??
नेपालको राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्न दिल्ली धाउने, दिल्लीको आशिर्बाद लिने, कहिले १२ बुँदे त कहिले ४ बुँदे सम्झौता गरेर स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको अस्तित्व धुलोमा मिलाउने भारतीय दलाल बनेका राजनीतिक अपराधीहरुहो तिमीहरुलाई नेपाल आमाको सराप लाग्नेछ !
मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिबारे भारतका नेताहरुसँग छलफल गर्न मोर्चाका चार शीर्ष नेता भारत जान लागेको मोर्चाले जनाएको छ । मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनतामा भ्रम छर्न मात्रै सरकारले वार्ताको नाटक गरेको आरोप लगाएका छन् । वार्ता प्रक्रिया चलिरहेका बेला सर्लाहीको नवलपुरमा मंसिर १७ गते प्रहरीले दमन गरेको र घटनामा एकजनाको मृत्यु हुनुका साथै २७ जना घाइते भएको मोर्चाले जनाएको छ । मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘जनतामा भ्रम छर्न सरकारले वार्ताको नाटक गरे पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरी सरकारले नै वार्ता भाँड्न खोजिरहेको हाम्रो ठहर छ ।’ नवलपुरमा आयोजित विरोध सभामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गाडीमा भएको तोडफोड तथा आगजनीको घटनाप्रति पनि मधेसी मोर्चाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मोर्चाले मानवअधिकारको रक्षा र सम्मानप्रति पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘एम्बुलेन्स सेवा, रेडक्रस, विदेशी कूटनीतिज्ञ, प्रेस, दमकल, शव बाहन, औषधि र मानवअधिकार लगायतका सवारी साधनहरु निर्वाध रुपमा चल्न दिई र आवश्यक परेको खण्डमा सहयोग समेत गरिदिनुहुन मोर्चा आहृवान गर्दछ ।’ मधेसी मोर्चाले भारतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिबारे विचार आदान-प्रदान गर्न चार नेता आइतबार भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत औपचारिक रुपमा जनाएको छ । प्रमुख दलहरुले पेश गरेको साझा प्रस्ताव संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सत्तारुढ साझेदार र प्रमुख विपक्ष दलहरुको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्णायक वार्ता गरौं भन्दै तीनबुँदे प्रस्ताव राखेका थिए । जसमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन अघि बढाउने र सीमांकनको विषय राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नाकाबन्दीले जनतालाई निकै सकस दिएको भन्दै अन्त्य गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । उनले प्राधिकरण पुनर्निर्माण गठन सम्वन्धि विधेयक अघि बढाउन समेत सहयोग मागेका छन् । तर, मधेसी मोर्चाले तीन दलको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । मोर्चाका तर्फबाट बोलेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसअघि नै अस्वीकार गरेको प्रस्ताव मान्न नसकिने बताए । उनले सरकारले नवलपुर लगायतका स्थानमा दमन गरेर वार्ताको वातावरण विगारेको आरोप समेत लगाए । एक नेताका अनुसार यादवले सरकारले वार्ताको वातावरण बनाए ११ बुँदेमा छलफल गर्ने वार्तामा बस्ने बताएका छन् । बैठकमा दलहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेपनि कुनै सहमति हुन सकेन । अनलाइन खबर अगाडि लेख्छ :
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलनको मुख्य मागका रुपमा रहेको सीमांकन हेरफेरलाई लिएर भारतसँग लिखित प्रतिवद्धता नै गरेको खुलेको छ ।
स्रोतका अनुसार उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री थापाले भारतीय कमकक्षी स्वराजसँग दिल्लीमा भएको भेटमा सहमति गरेका थिए । सो सहमति उनले लिखितरुपमै तीन दलका नेताहरुसमक्ष पेश गरिसकेका छन् ।